ဇန်နဝါရီလ 2016 |4၏စာမျက်နှာ 16 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 4)
ဂျင်မ်လမ်းပြ Noonan Key ကိုအကောင့်ကိုမန်နေဂျာအဖြစ်ထုတ်လွှင့် Pix ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Billerica, မက်ဆာချူးဆက် - အသံလွှင့် Pix ™ယနေ့ဂျင်မ်လမ်းပြ Noonan key ကိုအကောင့်မန်နေဂျာထိရောက်သောဇန်နဝါရီလ 18 အဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်, လမ်းပြ Noonan ကျယ်ပြန့်ရောင်းအားအတွေ့အကြုံ, စက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာနှင့်အကောင့်ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ အများစုမှာမကြာသေးမီကသူ Snell အဘို့အထုတ်လွှင့်ရောင်းအား၏အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယခင်ကသူအကြီးတန်းအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အထွတ်အထိပ်စနစ်များအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်အရှေ့ကမ်းခြေကျင်းပ ...
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုလဝေိ Whitney နှင့်အတူဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်ကျော်မြေ, Air နှင့်ရေဖော်ပြပေး
Park City, UT, ဇန်နဝါရီ 26, 2016 - လဝေိ Whitney, ပိုင်ရှင်နှင့်ကုန်းတက်ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာတဦးတည်းနောက်ဆုံးပေါ် mirrorless ကင်မရာများပြတဲ့ဗွီဒီယိုသရုပ်ပြကိုဖန်တီးရန်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသောအခါသူကသူတစ်ဦးကြမ်းတမ်းလိုအပ်သိတယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့် Multi-tasking tripod ထုံးစံ DSLR ကင်မရာနှင့် HDV ကင်မရာများ၏သေးငယ်သယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်အဘို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ AIR CF2 ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကို ရွေးချယ်. ...
DPA Microphones သည် Nikki Glaser နှင့်အတူလုံခြုံမှုမရှိဘဲ၊ Comedy ဗဟိုစီးရီးအသစ်အတွက် Hilari နှင့် Candid Audio ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။
Los Angeles, CA, ဇန်နဝါရီ 26, 2016 - ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှောဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS, ToneMesa, Inc တစ် Los Angeles မြို့-based တည်နေရာနဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှင့်အော်ပရေတာ, အသားအပေါငျးမှတ်တမ်းတင်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, Nikki Glaser နှင့်အတူကို Safe သစ်ကိုဟာသဗဟိုစီးရီးများအတွက်ရယ်စရာနှင့်ရိုးသားသောလယ်အသံ, မသူ DPA မိုက်ခရိုဖုန်း '' ဃလှည့်: screet ™ 4098 ...
Automated စတူဒီယိုများအတွက် Virtualization ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
အသေးဆုံးလွတ်လပ်သော Single-ဘူတာရုံစစ်ဆင်ရေး၏အပြင်ဘက်တွင်အများစုရေဒီယိုအဆောက်အယနေ့အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးထက်ပိုစတူဒီယို။ ကြီးမားတဲ့ network သို့မဟုတ် FM ရေ / AM ဘူတာ၏သေးငယ်တဲ့စပျစ်သီးပြွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အရှိဆုံးအဆောက်အဆက်ကပ်အပ်နှံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ outfitted On-လေကြောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှိသည်။ အစဉ်အလာအလိုအလျောက်ဗိသုကာတစ်ဦးချင်းစီစတူဒီယိုထဲမှာ PC ကိုလိုအပ်သည်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ box ကိုဗဟိုဆာဗာကိုချိတ်ဆက်, ဒါမှမဟုတ် ...
Austin, Texas ပြည်နယ် - ဇန်နဝါရီ 26, 2016 - BeckTV, United States ကို '' ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စနစ်များပေါင်းစည်းများထဲမှယနေ့ပြုလုပ် ATXN, Austin, Texas ပြည်နယ်၏မြို့အဘို့အစိုးရကတီဗီရုပ်သံလိုင်းမှာ system ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးစီးခဲ့ပါသည်ကြေညာခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမာစတာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆန်းသစ်တဲ့တတိယထိန်းချုပ်မှုအခန်း၏ထို့အပြင်, HD ကိုတစ်ခုအဆင့်မြှင့်မှတိပ်ကနေပြောင်းလဲခြင်းပါဝင်သည် ...
Frixxer နှင့် Youtoo အမေရိကတိုက် Juke Superbowl ကြော်ငြာ
ပွဲ Counterprogramming Live ဖို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ဟာလှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ဆုံးနေမရှိရင်ကြည့်ရှုသူများသည်အဆိုပါကြော်ငြာများ Skip တစ် Way ကိုကမ်းလှမ်းသင်ကြော်ငြာမုန်းတစ်ဝက်ဒုတိယသုံးလပတ်မှတဆင့်သူတို့နှင့်အတူပျင်းရ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းစွာအာမခံကုမ္ပဏီကြော်ငြာမှသေလွန်သောသူတို့သည်ဆိတ်သငယ်ကိုတွေ့မြင်ချင်ကြပါဘူး နောက်တဖန်ဘယ်လိုငါတို့ရှိသမျှသည်ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာအကြောင်းအရာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ...
BVE 2016 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview Riedel ဆက်သွယ်ရေးရပ်: M26 ဖေဖော်ဝါရီလ 23-25, လန်ဒန် MediorNet Micron Micron မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်၏ Riedel ရဲ့ MediorNet လိုင်းတစ်ခု 80G မီဒီယာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ Micron ဆစ်ဂနယ်များအပါအဝင်အချက်ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေဖြင့်အပြည့်အဝကိုဗီဒီယို Router ကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှ, မီဒီယာအခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပေးပါသည်! Micron ပေါင်းစည်းခံရဖို့မျိုးစုံယူနစ်ခွင့်ပြု, အပြည့်အဝအရွယ်မှာ ...
ဟင်းလျာများ HD ကိုအာရှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' HEVC Compression ကိုအဖြေရှာခြင်းအားဖြင့် Powered ပထမ Worldwide မှအားလုံး-HEVC DTH ဝန်ဆောင်မှု, လွှတ်တင်
RENNES, ပြင်သစ် - ဇန်နဝါရီ 25, 2016 - ဟင်းလျာများ HD ကိုအာရှ, အာရှထိပ်တန်း DTH ဂြိုလ်တုလစာ-TV ကိုန်ဆောင်မှုများထဲမှ၎င်း၏အသစ်သောက Ultra HD 7000K မောင်းထုတ်ရန်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်များမှဆုရ Vibe (R) VS4 HEVC အန်ကုဒ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အရှေ့မြောက်အာရှတစ်လျှောက်လုံးကြည့်ရှုရန်ထက်ပိုမို 120 လိုင်းများ၏ပေးပို့များအတွက် All-HEVC-HD ကိုဂြိုလ်တုဝန်ဆောင်မှုအဆင့်မြှင့်။ သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' MediaFlexOS အားဖြင့် Powered ...
4 ၏စာမျက်နှာ 16«ပထမဦးစွာ...«23456 » 10...နောက်ဆုံး»